May 2015 ~ Myanmar Cute Gay Boy (MCGB)
Teacher and Student (2014) [GThai]
On 6:28 PM by Myanmar Cute Gay Boy in gay movies2comments
On 5:53 PM by Myanmar Cute Gay Boy in gay life4comments
ဂေးဘ၀ဖြင့် အိမ်ထောင်မှုတစ်ခုကိုကောင်းစွာ တည်ထောင်နိုင်မည်လော?
ဂေးဘ၀ဖြင့် အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ယောက်ပီသစွာ ကောင်းစွာကျင့်ကြံနိုင်မည်လော?
ဂေးဘ၀ဖြင့် မိမိဇနီးမယားနဲ့သားသမီးအပေါ် ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်နိုင်မည်လော?
သိပ်မကြာသေးခင်က ကျွန်တော့်ကိုလူတစ်ယောက်က ဆက်သွယ်လာသည်။ ၄င်းသည်ဂေးတစ်ယောက်ဖြစ် ကြောင်းနှင့်၎င်းတွင် တရားဝင်လက်ထပ်ထားသောဇနီးနှင့်သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိကြောင်းပြောသည်။ ထိုသူသည် ကျွန်တော့်အား၎င်းဘ၀ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြပြီး ကျွန်တော်နှင့်တိတ်တိတ်ပုန်း ချစ်သူဖြစ်လို သေးကြောင်းကိုလည်းပြောပါသည်။ ထိုကိစ္စများကို ယခင်ကကျွန်တော်ရေးခဲ့ဖူးပါသည်။ လိင်တူချစ်သူဆက်ဆံ ရေးနှင့်အဓိကပြဿနာများ ဟူသောဆောင်းပါးတွင်းလည်းကောင်း ဂေးတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းမိဘကို ဖွင့်ပြောတော့မည်ဆိုလျင် ဟူသောဆောင်းပါးတွင်းလည်းကောင်း ဂေးဘ၀နှင့်သက်ဆိုင်သော ပြဿနာအချို့ ကိုကျွန်တော်ဥာဏ်မှီသလောက်တင်ပြခဲ့ဖူးပါ၏။ ယခုအခါထိုပြဿနာအချို့ထဲမှ တစ်စိတ်တစ်ဒေသသည် ကျွန်တော့်ထံသို့တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်လာပါ၏။
ကျွန်တော်လည်းယခုချိန်ထိ အိမ်ထောင်ပြုရမလားမပြုရဘူးလားဆိုတာကို မိမိကိုယ်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ခြင်းမရှိ သေးပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိန်းကလေးများကိုမချစ်တတ်သောမိမိ၏ဂေးစိတ်နှင့် ထိုဂေးစိတ်ကို ထိန်း သိမ်းနိုင်စွမ်းကင်းမဲ့သွားသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကို တွေးကြောက်ပြီး ရေရေရာရာ ဆုံးဖြတ်ဖို့မရဲခဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်ထံဆက်သွယ်လာသော ထိုလူကိုပြတ်ပြတ်သားသားငြင်းပယ်ပြီး ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်ပါသည်။
လိင်တူချင်းလက်ထပ်ဖို့အခွင့်အရေးနှင့်အခြေအနေမပေးသေးသည့် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုကဲ့သို့ တိတ်တိတ်ပုန်းလိင်တူချစ်သူများ ရေတွက်မရအောင်ရှိနေမည်။ ထိုလိင်တူချစ်သူများမှ မိဘနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏ ဖိအားအပြင် မိမိ၏စိုးရိမ်စိတ်အချို့ကြောင့် မိမိအမှန်တကယ်နှစ်သက်ခြင်းမရှိသော အမျိုးသမီများနှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပါက ၄င်းတို့၏ဘ၀သည် ပျံချင်လျက်နှင့်အချုပ်ခံထားရသော ငှက်တစ်ကောင်လို မွန်းကြပ်နေပေလိမ့်မည်။ ယခုပြဿနာများကို ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က ဦးဆောင်အဖြေရှာပြီး မဆွေးနွေးပါက မည်သူကမျှ အရေးတယူပြုပြီး ဖြေရှင်းပေးကြမည်မဟုတ်ပါ။ အခွင့်အရေးကိုလိုချင်ပါက အခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူတတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုလျင်လည်း အဆိုပါ ပြဿနာ၏ဇစ်မြစ်ကိုရှာပြီး ဖြေရှင်းဖို့မကြိုးစားပဲ တစ်စုံတစ်ခုကို အပြစ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေမည်ဆိုပါက ထိုပြဿနာသည် ပြေလည်သွားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ယခုကျွန်တော်တို့၏ပြဿနာမှာအိမ်ထောင်ပြုရေးမပြုရေးဖြစ်သည်။ ဂေးတစ်ယောက်သည်အိမ်ထောင်ပြုသင့် ပါသလား။ ဂေးဘ၀ဖြင့် အိမ်ထောင်မှုတစ်ခုကိုကောင်းစွာတည်ထောင်နိုင်ပါမည်လော?ဂေးဘ၀ဖြင့် အိမ်ထောင် ဦးစီးတစ်ယောက်ပီသစွာ ကောင်းစွာကျင့်ကြံနိုင်မည်လော?ဂေးဘ၀ဖြင့် မိမိဇနီးမယားနဲ့သားသမီးအပေါ် ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်နိုင်မည်လော? ဂေးတစ်ယောက်အိမ်ထောင်ပြုသင့်မပြုသင့်ဟူသော မေးခွန်းပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ပြဿနာပေါင်းများစွာရှိပါသည်။ အဆိုပါမေးခွန်းကိုကောင်းစွာဖြေနိုင်ရန် ၄င်းပြဿနာများကိုလည်း ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လိုအပ်သည်။
ကျွန်တော်ယခင်ကပြောခဲ့ဖူးသည်။ ဂေးတို့၏ Relationship သည်ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မှုနည်းပါးသည်။ ဂေးစုံတွဲ တို့တွင် ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းပြဿနာကင်းမဲ့ခြင်း လူသိရှင်ကြားလက်ထပ်ပြီး လုံခြုံသည့်တရားဥပဒေအကာအကွယ် ရယူရန်ခက်ခဲခြင်းနှင့် ကံဃာကံရှင်နှစ်ဦးစလုံးမှာအမျိုးသားများဖြစ်သောကြောင့် အချိန်မရွေးဖောက်ပြန်ရန် လွယ်ကူခြင်း စသည့်အချက်အလက်များကြောင့် ဂေးတို့၏ဆက်ဆံရေးသည် ခိုင်မာမှုနည်းပါးသည်။ လုံးဝမခိုင်မာဟု မဆိုလိုပါ သို့သော် ကျွန်တော်တို့မျက်စိရှေ့တွင် သွားနေသောလမ်းစဉ်များမှာ ယခုကျွန်တော် ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းသာဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ဂေးတစ်ယောက်အနေဖြင့် လုံးဝမုချအိမ်ထောင်ပြုမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားပါက ယခုအချက်အလက်များ ကိုလည်းစဉ်းစားသင့်သည်ဟုထင်သည်။ ဂေးတစ်ယောက် အပုန်းဘ၀ဖြင့် မိမိဇနီးကို ယောကျာ်းစစ်ချင်ယောင် ဆောင်ကာ လိမ်ညာလက်ထပ်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် လိပ်ပြာလုံနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမည်။ မိမိ၏ဇနီးမယား အပေါ် စစ်မှန်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အကြင်နာတရား ပေးနိုင်ရမည်။ မိမိဇနီးနှင့်မိသားစုအပေါ် တာဝန်ကျေပွန်သော ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနိုင်ရမည်။ မိမိ၏မိသားစုနှင့် မိမိ၏ဂုဏ်သိက္ခာကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သောအားဖြင့် ဆိတ်ကွယ်ရာတွင် ဖြစ်စေ ရှေ့တွင်ဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဂေးစိတ် များကိုချေဖြတ်နိုင်ရမည်။ ထို့အပြင် အခြားအရှက်ရစေမည့် ဒိတ်တင်လုပ်ခြင်း မိမိနှင့်နီးစပ်ရာယောကျာ်းငယ် များအပေါ် စိတ်တိမ်းညွှတ်ခြင်း ယောကျာ်းအချင်းချင်းလိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်ဖြစ်ခြင်းများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ လိုအပ်သည်။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေဟာ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်တင်ပြထားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့ ပြဿနာ မူရင်းမှာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလောက်ကချင်မှကပါလိမ့်မည်။ ဒီတော့ မေးစရာရှိလာသည်။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သ လိုပဲဂေးတစ်ယောက်ဟာ အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီစည်းကမ်းတွေကို အချက်အလက်တွေကို လိုက်နာနိုင်ပါ့မည်လော။ နှမချင်းအမချင်းစာနာသောစိတ်ဖြင့်တွေးကြည့်မည်ဆိုလျှင် မိန်းကလေးတစ်ယောက် အတွက် အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည် ၄င်းဘ၀တစ်ခုလုံးကို မိမိအားကိုးရသောသူထံသို့ ပုံအပ်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းသည် ၄င်းဘ၀သာယာဖြောင့်ဖြူးလုံခြုံစေဖို့ ၄င်းအတွက်အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းစေဖို့ ၄င်းအတွက် တစ်သက်စာစစ်မှန်သော ကြင်နာသူအဖြစ်နှင့် အမျိုးသားဖြစ်သူကိုလက်ထပ်ယူခြင်းသာဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှု ၄င်း၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ၄င်းအပေါ်တာဝန်ယူလိုစိတ်တို့ ကို ကျွန်တော်တို့ထံတွင် အမှန်တကယ်မရှိပါပဲ ကျွန်တော်တို့သည် မိန်းကလေးတွေကို ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်ပြီး လက်ထပ်သင့်ပါသလား။
ဒီကိစ္စကိုစဉ်းစားမိတိုင်း ကျွန်တော်တော်တော်ဦးနှောက်ခြောက်မိပါသည်။ ဂေးတစ်ယောက်ဟာ အိမ်ထောင်မပြု တော့ဘူးဆိုပါကလည်း အောက်ပါစိုးရိမ်စရာကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသေးသည်။ အိမ်ထောင်မပြုခြင်းကြောင့် ရေရာသေချာသော ဘ၀လက်တွဲဖော်မရှိခြင်း၊ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာသည့်အခါ ပြုစုစောင့်ရှောက်မည့် သားထောက်သမီးခံမရှိမှာကို စိုးရိမ်မိခြင်း၊ မိမိဘ၀သည်အပုန်းဘ၀ဖြင့် လူသိမခံဝံ့ပဲအထီးကျန်ခြောက်ကပ် နေမှာစိုးရိမ်မိခြင်း၊ လူပျိုကြီးဘ၀ဖြင့်ဟန်ဆောင်ထားမိသောကြောင့် မွန်းကြပ်သည့်စိတ်ခံစားမှု စိတ်ဖိစီးမှုများ ဖြစ်ခြင်း၊ ယောကျာ်းအချင်းချင်းအသက်ကြီးသည်အထိ အတူနေထိုင်နေပါက ပတ်ဝန်ကျင်မှ ကဲ့ရဲ့မည့်ဒဏ်များ ကိုစိုးရိမ်မိခြင်း အစသည့်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
အခြားသူများကို ဥပမာပေးပြီးမပြောလိုပါ။ ကျွန်တော့်အသက်အခု ၂၃ပြည့်ပါတော့မည်။ အသက်၁၇နှစ်မှ စတင်ပြီးမိမိကိုယ်ကို ဂေးဟုခံယူခဲ့မိသည့်အချိန်မှစပြီး ယခုအချိန်အထိ ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့သော ဂေးသက်တမ်းအရအတွေ့အကြုံများစွာရမိသည်။ သို့သော်ယခုချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်သည် ထိုအရာများကို တဖြည်းဖြည်းကြောက်ရွံ့နေမိပါသည်။ ကျွန်တော်အထက်မှာရေးသားခဲ့သလိုပဲ ကျွန်တော့်ထံတွင်လည်း ထိုကဲ့သို့ အတွေးပေါင်းများစွာရှိနေပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချဖို့ လုံးဝမခိုင်မာသေးသည့်အပြင် မိမိဘ၀ကို လည်းမည်သို့ရှေ့ဆက်ရမည်မသိသေးပါ။ ကျွန်တော်အထီးကျန်မှာကြောက်မိပါသည်။ မိမိအသက်ကြီးသည့် အခါပြုစုစောင့်ရှောက်မည့်သူ အဖော်ပြုပေးမည့်သူမရှိမှာကိုလည်းစိုးရိမ်မိသည်။ ထို့အပြင် မိမိမချစ်မနှစ်သက် သောအမျိုးသမီးများနှင့်လည်း လက်ထပ်ရမှာကိုမလိုလားပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်း သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနှင့် မိသားစုဝင်များမှ ကျွန်တော့်အား ချစ်သူရည်စား ကောင်မလေးရှိနေပြီလားဟုမေးသည့်အခါတိုင်းတွင် လည်းပြန်ဖြေစရာစကားလုံးတို့ ကျွန်တော်ရှာမတွေ့ခဲ့ပါ။ မိမိကြောင့်သူတစ်ဖက်သားကို ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်စေချင်သလို မိမိဘ၀ကောင်းစားဖို့အတွက်လည်း သူတစ်ပါး ၏ဘ၀ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်ပြီး မသိမ်းပိုက်လိုပါ။